On-Grid Inverters Vagadziri - China On-Grid Inverters Factory & Suppliers
RENAC Pro yakatevedzana inverter inonyanya kugadzirirwa zvekugara uye zvidiki zvekutengesa mapurojekiti.Iine compact dhizaini, iyo inverter yakareruka uye iri nyore kuisa.Iyo yakanyanya kushanda zvakanaka i98.5%.Iine advanced yakagadziridzwa ventilation system, iyo inverter inokwanisa kubvisa kupisa zvakanaka.
RENAC R1 Macro Series is one-phase on-grid inverter ine yakanakisa compact size, yakazara software uye hardware tekinoroji.Iyo R1 Macro Series inopa kushanda kwepamusoro uye kirasi-inotungamira inoshanda fan-shoma, yakaderera-ruzha dhizaini.
Renac R3 Max Series 120-150 kW nhanho nhatu dzakateedzana tambo inverter inotora 10/12 MPPT dhizaini kuti ipe imwe inochinjika dhizaini yekumisikidza.Iyo yakanyanya kupinza ikozvino yetambo yega yega inosvika ku13A, iyo inogona kunyatsogadziriswa kune yakakwirira simba module kuti iwedzere kugadzirwa kwemagetsi.
Kugadzirisa kunogona kuitwa nyore kuburikidza neBluetooth.Smart IV Curve Basa, Husiku SVG Basa, zvichiita kuti O&M ive nyore.
RENAC R3 Plus Series inverter yakanakira epakati kusvika kuhombe mapurojekiti ekutengesa, kunyanya kune akakura ekutengesa matenga uye zvidyarwa zvepurazi.Iyo mhando inoshandisa advanced topology uye innovative control tekinoroji kuti iwane kugona kwakanyanya kwe99.0% uye yakakwira-yenguva refu yekudzoka uye pundutso kune varidzi veprojekiti.
Iyo R3 Pre series inverter inonyanya kugadzirirwa matatu-chikamu chekugara uye madiki ekutengesa mapurojekiti.Iine compact dhizaini, iyo R3 Pre series inverter iri 40% yakareruka kupfuura chizvarwa chakapfuura.Iyo yakanyanya kutendeuka inoshanda inogona kusvika 98.5%.Iyo yakanyanya kupinza ikozvino yetambo yega yega inosvika ku13A, iyo inogona kunyatsogadziriswa kune yakakwirira simba module kuti iwedzere kugadzirwa kwemagetsi.
RENAC R3 LV Series matatu-phase inverter yakagadzirirwa ine yakaderera voltage magetsi ekuisa diki yekutengesa PV application.Yakagadzirwa sesarudzo inosarudzika yemusika wekuSouth America kudiwa pane yakaderera-voltage inverters pamusoro pe10kW, inoshanda kune akasiyana grid voltage renji mudunhu, iyo inonyanya kuvhara 208V, 220V uye 240V.Iine iyo R3 LV yakatevedzana inverter, iyo sisitimu yekumisikidza inogona kurerutswa pachinzvimbo chekumisikidza inodhura inoshandura iyo inokanganisa zvakanyanya shanduko yehurongwa.
RENAC R3 Cherechedzo Series inverter ndiyo imwe yeakanakisa sarudzo inowanikwa munzvimbo dzekugara uye dzekutengesa nehunyanzvi hwayo hwekusimba, izvo zvinoita kuti ive imwe yeanonyanya kugadzira inverters pamusika.Nekushanda kwepamusoro kwe (98.3%), kuwedzera kuwandisa uye kuwandisa masimba, R3 Cherechedzo Series inomiririra kuvandudzwa kunoshamisa muindasitiri yemagetsi.
Renac R1 Moto akateedzana inverters anozadzisa zvizere kudiwa kwemusika kweakakwira-simba rimwe-chikamu modhi yekugara, uye akakodzera kudzimba dzekumaruwa uye mavillas emudhorobha ane nzvimbo dzakakura dzedenga.Ivo vanogona kutsiva kuisa maviri kana anopfuura akaderera simba single-phase inverters.Ndichiri kuona mari yekugadzira magetsi, mutengo wesystem unogona kudzikiswa zvakanyanya.
RENAC R1 Mini Series inverters isarudzo dzakanakira mapurojekiti ekugara ane simba rakanyanya density, yakafararira yekuisa voltage renji kuti iwedzere kuchinjika kuisirwa uye mutambo wakakwana wepamusoro simba PV mapaneru.
Inverter Off Grid 5kw, Hybrid On Grid Inverter, Off Grid Micro Inverter, Hybrid PaGrid Inverter Ine Simba Rekuchengetedza, Mhepo Turbine Grid Tie Inverter, Hybrid Grid Tie Inverter,